Tontolo Arabo: Saribakoly Manao Saron-doha Voahenjika Tao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2017 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, عربي, English
Fulla manao saron-doha.
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamn'ny Janoary 2007)
Indro Fulla, ilay saribakoly Barbie nanamarika an'ireo tandrefana hatramin'izay manao saron-doha amin'ny endriny Silamo Arabo.
Manao Hijab (na saron-doha) sy fitafiana silamo ny Barbie-nay – akanjo rebareba lava tànana. Raha fitahiana izy ho an'ireo ray aman-dreny ao anatin'ny tontolo silamo izay faly amin'ny fahitàna ireo zanany milalao ilay saribakoly izay mifanaraka amin'ny fomban-drazana sy ny fivavahana, ilay Ejiptiana bilaogera, Ahmed Shokeir, kosa dia naneho ny rikorikony tamin'ireo Tonizianina manampahefàna izay tsy faly amin'ilay saribakoly ka nitarika fanenjehana sy fanesorana azy teny amin'ireo toeram-pivarotana.
“Saribakoly Arabo i Fulla, taona vitsivitsy izay no nanamboarana azy ary nalaina tamin'ilay saribakoly malaza Barbie izy io. Rariny loatra izy ity raha miseho amin'ny endriny Arabo na indrindra fa amin'ny Golfa Arabo, nampiakanjoana ny fitafy mahazatra ny olona any amin'iny faritany iny. Nataon'ireo mpamokatra azy ity tsara antoka mihitsy ny amin'ny fampanaovana azy saron-doha sy ny kapaoty tsy misy voaly manarona ny tarehy. Fa i Tonizia ary tsy fantatrao hoy toy inona i Tonizia, dia nanao fanakanana sy nanaisotra ireo saribakoly ary ireo kojakoja misy ny endrik'i Fulla (toy ny fitaovam-pianarana sy ny kitapo) teny amin'ny tany satria ny akanjo anaovany dia manely fitsitokotokoana. Nanoratra ny iray tamin'ireo mpanao gazety fa mitondra ny sarin'i Fulla ireo kitapo fitondra mianatra ary nanahy izy fa hosamborina sy hohadihadiana ireo ankizy noho ny fitondrany ilay kitapo,” hoy ihany izy
Mbola tany Ejipta ihany, fa mikasika resaka somary efa ankehitriny indray kosa, niverina niakatra fitsarana androany (Alakamisy 25 Janoary) ilay bilaogera Kareem Nabeel Suleiman, izay nolavin'ny mpitsara ny hamotsorana azy na misy antoka aza.
Suleiman, 22 taona, voasambotra tamin'ny volana Novambra noho ny lahatsoratra nosoratany tamin'ny aterineto, ary mbola voampanga aminà raharaha maromaro ihany koa – izay nanomboka taminà lahatsoratra niteny ratsy ny finona silamo ka tonga hatramin'ny fanalana baràka ny filoham-pirenena Ejiptiana.
Tao amin'ny fitsarana i Wa7da Masrya, bilaogera namana, ary manoritra amintsika ny zava-nitranga. Tonga tao amin'ny fitsarana tamin'ny 9 ora maraina niaraka tamin'ny mpisolovava azy, ireo mpanao gazety sy bilaogera hafa i Wa7da Masrya.
“Niandry fatratra izahay androany ary efa saika noroahan'izy ireo tany ivelan'ny fitsarana rehefa noraràny tsy haka sary ny adihevitra ny ekipan'ny fahitalavitra. Noraràn'izy ireo tsy haka sary aminà fitaovana tsotra ihany koa ireo olona. Tonga teny an-toerana ihany koa ny ekipan'ny fahitalavitra Dream TV ary voarara tsy haka sary ny adihevitra ihany koa izy ireo. Tafiditra tao amin'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny fitsofohana tany amin'ny garazy i Kareem ary tsy nisy nahita. Na ny fipetrahana tao anatin'ny lapan'ny fitsarana aza dia nandraràna anay ihany koa ambara-pahatongan'ny fiantsoana ny raharaha momba an'i Kareem,” hoy izy nanoratra.
Nanomboka tamin'ny mitatao vovonana ny fitsarana hoy Wa7da Masrya.
“Nahemotra ny raharaha ary niangona teny ivelan'ny lapan'ny fitsarana izahay hiandry ny valim-pitsarana. Nandritra izany fotoana izany, mpanao gazety vitsivitsy no niresaka taminay niezaka ny hahafantatra na miombon-kevitra amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Kareem izahay na tsia. Niezaka nanazava tamin'izy ireo izahay fa na eo aza ny tsy fiombonanay hevitra amin'i Kareem, dia tonga eto kosa izahay noho ny finoanay ny fahalalahana miteny ary tsy hanova na zavatra iray aza ny fisamborana sy fanasaziana tahak'izao,” hoy ihany izy.
Lavitra an'i Ejipta sy ny olany ‘maro’, nanapaka hevitra i Ben Kerishan avy ao Abu Dhabi fa haka kely ny fialantsasatry ny ririnina ao Beiroty, Libanona, hiaraka aminà namana iray.
Miaraka amin'ny fandraràna ny fisotroana alikaola mitàna ny lohalaharana ao anatin'ny finoana Silamo, fanamby voalohany ho an'i Bin Kerishan ny fisotroana azy io ao anaty fiaramanidina na eo aza ireo havan'ity namany.
“Tao anaty fiaramanidina, indrisy fa nipetraka teo akaikinay ny dadatoan'i Shuhail. Noarahabainy izahay ary nandainga taminy fa hanao fivahinianana arahan'asa. Nibitsibitika teo an-tsofiko i Shuhail: Tsy ho afaka ny hisotro mihitsy aho mandritra ity sidina ity. Niezaka ny nampitony azy aho ary nilaza taminy fa eo anilantsika i Allah.”
Nikaomandy Buck's Fizz (ranonà voasary sy champagne mifangaro) i Bin Kerishan mba tsy hahenoana ny fofon-taoka.
Na nanana drafitra feno aza izy ireo handaniana ilay fotoana fialantsasatra fohy, tamin'ny fisotroana, kilalao sy ny fihinanana, dia toa adinon'izy ireo fa miatrika olana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohitra i Libanona.
شرح لنا السائق فادي ان الناس لاتخرج الي السوليدير بسبب الاعتصام الذي يقوم به جماعة حزب الله..ثم اخذنا الي اماكن خيامهم المنصوبه و كانها مضارب ارض الرمال في وسط السوليدير ..شباب يلعب كرة قدم في الساحه..مطابخ منصوبه في الخيام..شرح لنا فادي ان الحزب يدفع عشرين دولار لمن يعتصم نهارا..و خمسين دولار لمن يبقى طوال الليل..و بما ان اليوم عطلة الاسبوع فعدد المعتصمين يزداد حيث تاتي العوائل الفقيره المعترّه لتقضي سهرتها هنا.. تتعشى ببلاش على حساب خامئني
“Nohazavain'i Fadi, mpamily ny fiaranay, fa tsy mankany amin'ny Solidaire (afovoan-tanàna) ny olona noho ny fihetsiketsehana tarihan'ny Hizbulla Nentiny teny amin'ny toerana nananganana ny tranolain'izy ireo izahay. Teo no nahitanay lehilahy nilalao baolina kitra ary lakozia ankalamanjàna tany amin'ireo tranolay. Hoy i Fadi: andoavan'ny antoko 20$ ireo izay manotrona ilay fihetsiketsehana mandritry ny tontolo andro ary 50$ kosa ho an'izay maharitra hatramin'ny alina. Koa satria moa fotoam-pialantsasatra androany, dia maro amin'ireo fianakaviana mahantra no niverina nanao rodobe handany ny faran'ny herinandrony sy hahazo sakafo hariva maimaimpoana, noho i Khamenei,” hoy ihany izy.
Ao Yemen no fitodianay farany, toerana izay heverin'i Thamud fa nisolokiana azy rehefa nandaniany 150$ tao amin'ny sekolim-panjakana fianarana mitondra fiara.
“Telo amby roampolo taona aho ary tsy afaka mitondra fiara, tsy fantatro hoe inona no antony tsy nianarako nitondra fiara tany aloha.” Tsy dia nanana namana mitondra fiara loatra aho tamin'ny fotoana naha-adolatsento ahy. Tsy nananako ihany koa ny namana tsy mivaky loha, izay mitondra fiara miaka-midina eny an'arabe rehetra eny mandritry 24 ora maninjitra – ilay karazanà olona ampitandreman-drainao anao ireny – mba hampianatra ahy hitondra fiara. Lasa nandeha maraina tany amin'ny sekoly fianarana mamily aho ary nisoratra anarana ho amin'ny fandaharam-pianarana maraina. Maharitra tapa-bolana raha ny tena marina ity fandaharam-pianarana ity. An-tsoratra ny voalohany ary fampiharana tena izy ny faharoa. Mitentina 150$ ilay voalohany, izay tena vola mihoampapana tokoa. Tokony ho kely noho izany ny vola naloako raha mpampianatra manokana no nalaiko,” araka ny fanazavàny.